TSL ထုတ်ကုန်များသည် NAB နယူးယော့ခ်ရှိ 2019 ရှိ၎င်း၏ Audio Monitorin Solutions နှင့် Broadcast Control Systems သို့မွမ်းမံမှုများတင်ပြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ယင်း၏အသံ Monitorin Solutions နှင့် NAB နယူးယော့ 2019 မှာထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များမှ TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအပ်ဒိတ်များ
နယူးယောက်, အောက်တိုဘာ 7, 2019 - TSL ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, (NAB နယူးယော့ 2019 မှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အသံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်မည်ဖြစ်သည်Booth N155) ။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်က၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ပြောင်းလဲနေတဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့် IP ကို ​​Workflows ဆီသို့အကူးအပြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ TSL က၎င်း၏ SAM ကို-မေးပလက်ဖောင်း, Pam-IP ကိုနှင့်၎င်း၏ MPA1 လိုင်းများအပါအဝင်ယင်း၏အသံစောင့်ကြည့်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်ဖို့ updates များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာအဖြစ်က၎င်း၏ IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy, ဘယ်နေရာမှာမဆို Interface ကိုသေတ္တာနှင့် Flashboard updates များကိုများ၏အကွာအဝေးမှ updates များကိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
TSL လည်းယင်း၏ Pam-အိုင်ပီလိုင်းနဲ့ audio နဲ့ video စောင့်ကြည့်မှုထက် ကျော်လွန်. က၎င်း၏ကျယ်ပြန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမှ updates များကို feature ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Pam-IP ကို ​​2022-6 နှင့် 2110 အသံမော်နီတာများအတွက်စံသတ်မှတ်ထားဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသံကျယ်တိုင်းတာခြင်း, အပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့မီတာနှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွင်းအစွန်း device ကိုထိန်းချုပ်မှု၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, ဖောက်သည်များယခုသူတို့ရဲ့ Pam-IP ကိုအသံမော်နီတာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်စေ '' In-Band 'သို့မဟုတ်' 'Out-of Band' 'ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Pam-IP ကိုတစ်ဦး TSL သို့မဟုတ် 3rd ပါတီထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ST-2110 နှင့် ST-2022-6 multicast subscriptions ကိုအသုံးပြုခြင်းယခုမီးတောက် + NMOS သို့မဟုတ် TSL ၏ကိုယ်ပိုင်အရာကြွင်းသမျှ API ကို protocol ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် NAB နယူးယော့မှာပြသလျက်ရှိသည့် MPA1-SOLO-MADI နှင့် MPA1-SOLO-Dante များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံမီတာနှင့် MPA1-MIX-MADI များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှေ့ panel ကိုသဘောတရားများအပါအဝင် TSL ရဲ့ MPA1 အသံစောင့်ကြည့်မှုအကွာအဝေး၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါအကွာအဝေးကိုလည်းအားလုံး MPA1 အသံမော်နီတာများအတွက် SNMP မှတဆင့်တိုးတက်လာသောထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်နီတာအဆုံး-အသုံးပြုသူများကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူရုံ 100mm နက်ရှိုင်းမှာအသံစောင့်ကြည့်ဖို့ကို enable, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောယင်ကောင်ထုပ်နှင့် OB ကုန်တင်ကားအဖြစ်အာကာသပရီမီယံသည်အဘယ်မှာရှိ applications များ, များအတွက်အထူးသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
ထိန်းချုပ်မှုအခြမ်းတွင်, TSL က၎င်း၏အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မာစတာထိန်းချုပ်မှု, ပလေးအောက်နှင့်ဂီယာအတွင်းအမျိုးမျိုးသောအသစ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်စွမ်းအားဖြင့် TSL ရဲ့ Flex ကိုကွန်ယက်မှကျေးဇူးတင်စကား DNF ထိန်းချုပ်မှုများ။ ဤရွေ့ကား updates များကိုအသုံးပြုသူများကသူတို့အပေါ်မူတည်ကြောင်းဝေဖန် devices တွေကိုထိန်းချုပ်ယူခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သတင်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်ရိုးရှင်းဖို့ ENPS နှင့် iNews နှင့်အတူ MOS ပေါင်းစည်းရေးပါဝင်သည်။ ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်အဘို့, ဖောက်သည်များယခုကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်များအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက် devices တွေကိုကျော်ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူမူလတန်းသို့မဟုတ် backup လုပ်ထား / ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်အလိုအလျောက်စနစ်များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါထို့အပြင်သုံးစွဲသူများသည်ယခုအမှန်တကယ်အချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များနှင့်အတူ SCTE ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် automated ထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်အားပညတ်တော်မူ၏, စီမံခန့်ခွဲအကူးအပြောင်းများနှင့်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
TSL ကိုလည်းရဲ့ IP ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy အပါအဝင်အသစ်ကတစ်လောကလုံးကိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်များနှင့် interfaces ၏အကွာအဝေး, အဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမဆို Interface ကိုသေတ္တာ၎င်း၏လိုင်း (AIBs) ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ TSL ရဲ့ IP ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy ဆို GPI / O-, Serial- နှင့် IP-enabled device ကိုထိန်းချုပ်စေတဲ့အစွမ်းထက်သေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းမှလေးခလုတ်ကနေချုံ့ချဲ့ခြင်း, IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy / off'-စတိုင်လုပ်ရပ်များအပေါ် '' ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေး salvos ဖြစ်ပေါ်, နှင့်၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား flyaway ပစ္စည်းများနှင့်အမြန်-စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရန်စုံလင်သောစေသည်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ AIB စီးရီး, အထူးသ A / V ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေဒီယို, စက်မှုနှင့်တီဗီအသံလွှင့်ဈေးကွက် segments များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုစနစ်များကိုပေါင်းကူးနှင့်မည်သည့် programming ကိုဖျော်ဖြေခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ device ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် interface ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဘို့, AIBs အဆိုပါ AIB-16 လည်း Ethernet, 4-လမ်း DTMF နှင့် dial-up modem ပေးအတူ2GPI / OS နဲ့မျိုးစုံ device ကိုထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းမှတက်ကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကိုသင်လိုအပ်လေရာရာ၌အဆိုပါ AIBs သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး GPIs နှင့်တွင်-Air လေကြောင်းလိုင်း, လယ်သို့ tallies - မြို့ကြီးများ, ပြည်နယ်နှင့်ပင်တိုက်ကြီးအနှံ့ - အဝေးမှ။ မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး application များအတွက် configuration ကို 'ပရိုဂရမ်မာ-အခမဲ့' 'web browser ကိုအတူလွယ်ကူသောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအရေးပါသောလုပ်ငန်းအသွားအလာသတင်းအချက်အလက်မြင်ယောင်မှဖောက်သည်များ '' ကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် TSL သို့မဟုတ်အခြား Third-party ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှ FlashBoard ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ NAB နယူးယော့မှာ TSL ခေတ်မီစနစ်နှင့်ကမ္ဘာကြီးနာရီအပါအဝင် FlashBoard ရဲ့ interface ကိုအများအပြား features တွေ၏ထို့အပြင်သရုပ်ပြမည်, တက်-Down ထုတ်လုပ်မှုတိုင်မား, On-လေထုနှင့် cue အလင်းအရိပ်အယောင်, On-screen ကိုအမှတ်တံဆိပ်, web-based အကြောင်းအရာ display နှင့်ဗီဒီယိုကအုပ်ကြွပ် ။
audio ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု ip MPA1 နယူးယော့ NAB 2019 အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် Pam-အိုင်ပီ SAM ကို-မေး လှံ & Arrows TSL ထုတ်ကုန်များ တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Workflows 2019-10-07
ယခင်: NAB နယူးယော့မှာအရည်အသွေး-ရဖို့သေချာ Delivery မှထုတ်ကုန်များနှင့်စားသုံးမိရာမှန်ဆောင်မှုများ၏ Telestream ဟန်ပြနောက်ဆုံး lineup
နောက်တစ်ခု: များတွင် RBS အားလုံးစခန်းများတစ်ဖက်မှာ Automation များအတွက် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များကိုရွေးကောက်ပြီး